वेबसाइट डिजाइनमा सांस्कृतिक भिन्नताहरू तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्दछ: Semalt सिंहावलोकन
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका वेब आगन्तुकको समान प्राथमिकता हुँदैन। संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपका व्यक्तिहरू र color्ग, साइट संरचना, रूपरेखा, छवि, र वेबसाइटको अन्य तत्त्वहरूको बारेमा फरक स्वादहरू राख्दछन्, जुन एशियाईहरूको प्राथमिकताभन्दा फरक पनि छ। अफ्रिकीहरू
अधिकतम बेल, Semalt विज्ञ, वेब डिजाइन मा सांस्कृतिक प्राथमिकताहरूको प्रश्न र किन तिनीहरू एक विशेष साइट को लागी वेब ट्राफिक को प्रभाव मा व्याख्या गर्दछ।
के सांस्कृतिक भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ?
वेबमा आधारित व्यवसायहरू चाँडै नै प्रक्षेपणको छोटो समयमा विश्वव्यापी क्षेत्रमा विस्तार हुँदैछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विभिन्न संस्कृतिहरूको मिश्रण छ जुन सबै स्वादको लागि अपील गर्दछ। विविध संस्कृतिहरूबाट बजार प्राथमिकताहरू लक्षित गर्न प्रतिक्रिया अवस्थित विविधताको गहन समझ र उनीहरूलाई एकीकृत गर्न वेबसाइट आवश्यक गर्दछ जुन एसईओ संयन्त्रहरू लागू गर्नका साथै क्रस संस्कृतिसँग पहिचान योग्य हो।
वेबसाइटको डिजाइनले व्यक्तिहरूको चयनित समूहबाट ट्राफिकलाई आकर्षण गर्न सक्दछ केवल प्रयोग गरिएको डिजाइनका कारण जुन अन्य समूहहरूलाई अप्रसन्न लाग्न सक्छ। राम्रो विकल्पले एसईओ प्रणाली प्रयोग गर्दा लक्षित खरीददारहरूको बहुमतको स्वाद भेट्दछ।
स्थानीय अनुसन्धानले संस्कृति र वेबसाइटहरूको बारेमा के भन्छ?
नेदरल्याण्ड्सको यस किसिमका साइटहरूको तुलनामा वेब डेन्सनरहरूको टोलीले गरेको स्थानीय अध्ययनले अमेरिकी दन्त वेबसाईटहरूमा रहेको समानता र भिन्नताहरूको अनुसन्धान गर्दछ। अध्ययनले वेबमा संस्कृति र प्रस्तुतीकरणको बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी पोस्ट गर्‍यो। अमेरिकी साइटहरूमा सुन्दर सेता दाँतहरू देखाउँदै छवि ग्यालरीहरू थिए। यसको विपरीत, नेदरल्याण्ड्स सेतो बनाउन मनपराउँदैन, र सेता दाँतको प्रदर्शन वेबसाइटसँग परिचित छैन। केवल सामान्य खैरो दाँत सामान्य छ।
वेबमा दन्त देखभाल जानकारीको प्रस्तुतीकरणमा भिन्नताहरू धेरै फरक थिए। शीर्षक बराबरका साथै रंगहरूको छनौट पनि थिए। डच साइटहरूमा फुटर बारको अभाव थियो। त्यहाँ अधिक साक्षी र संयुक्त राज्य अमेरिका मा सोशल मीडिया को उपयोग थियो। डचले खुला समय धेरै पटक प्रदर्शन गर्‍यो जब संयुक्त राज्यले सूचना प्रस्तुत गर्न स्लाइडि films फिल्महरू प्रयोग गर्‍यो।
डच साइटहरूमा त्यहाँ अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण छ जबकि अमेरिकीहरूले सुन्दरता र सजावटको वर्णन गर्छन्। संक्षेप मा, भिन्नता साइटहरु द्वारा बनाईएको वातावरणमा हो।
धेरै वैज्ञानिक स्पष्टीकरणहरु मा पांच सांस्कृतिक आयाम को Hofstede मोडेल, जो वेब डिजाइन को लागी प्राथमिकताहरु को रूप मा सामिल छ। तिनीहरूले यस सांस्कृतिक घटनाको व्याख्या गर्ने प्रयास गरे। व्यक्तिवादी समाज र सामूहिक समुदायहरूले वेब पृष्ठको बिभिन्न प्रस्तुतीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छन्। छविमा वा छविमा पाठ, एक व्यक्ति वा समूहको छविमा प्रयोग गर्दा केहि प्राथमिकताहरू वर्णन गरिएका छन् कि अनलाइन शपरहरूलाई विभाजन गर्नुहोस्। कुनै वैज्ञानिक अध्ययनले अनलाइन शपर्सहरूको व्यवहारको लागि ठोस सांस्कृतिक प्रमाणको पर्दाफास गर्दैन।
सांस्कृतिक विविधता हस्तक्षेप
एसईओ बाहेक, अनलाइन स्टोरमा वेब ट्राफिक आउँछ जब यसको मालिकले लक्षित बजारलाई बुझ्दछ। वेबमा थोरै अनुसन्धानले संरचनालाई मद्दत गर्न र साइटलाई आकर्षक स्तरमा सजाउन मद्दत गर्दछ।
साइटहरू, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूलाई लक्षित गर्दछ, सांस्कृतिक तटस्थता र बहुभाषिक दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ SEO एसईओ मापदण्ड लागू गर्ने क्रममा। त्यसोभए सफलताको कुञ्जी भिन्नताहरू बुझ्नु र लक्षित बजारहरूमा प्राथमिक अनुसन्धान गर्नु हो।